विकाशलाई प्रश्न, ‘हजार जुनीसम्म’ नै किन ? « Intro Nepal
विकाशलाई प्रश्न, ‘हजार जुनीसम्म’ नै किन ?
Published On : १९ श्रावण २०७६, आईतवार १७:४९
ट्रेलर सार्वजनिक भए पश्चात फिल्म हजार जुनीसम्म झनै प्रतिक्षित बनेको छ । फिल्मलाई चर्चित सिरिज ‘नाई नभन्नु ल’का निर्देशक विकाश राज आचार्यले निर्देशन गरेका हुन् । लेखक हुँदै निर्देशनमा आएका विकाशले केही वर्ष यता नाइँ नभन्नु ल सिरिजलाई नै अगाडी बढाई रहेका छन् । तर, यतिबेला उनले आफ्नो व्यानरबाट पर हटेर ‘हजार जुनीसम्म’ निर्देशन गरेका छन् । टिम उस्तै भएपनि मर्म भने केही फरक छ । यसपटक कथ्य शैली नै भिन्न रहेको विकाश बताउछन् ।
यो नाइँ नभन्नु ल ६ हो भन्ने चर्चा पनि चलिराछ नि ?